လွင့်မောင်မောင် ၏ Diary |General Knowledge,Astrology
ဘုရားဖူး ၊ ခရီးသွား
(ဟာဂျူလီ - ကသာ) ကွယ်လွန်
Written By Aye Minn on Friday, August 18, 2017 | 9:10 PM
Written By Aye Minn on Wednesday, May 11, 2016 | 8:22 AM
Labels: ကျန်းမာရေး, ဆေးနှင့်ကျန်းမာရေး
Written By Aye Minn on Thursday, March 31, 2016 | 8:26 AM
Written By Aye Minn on Thursday, March 17, 2016 | 7:42 PM
ရေလည်းမကျန်၊တအားစေးကပ်သွားတာလဲမဟုတ်ပဲ သင့်တော်တဲ့အနေအထားထိထားပြီး အအေးခံထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပုလင်း(သို့)ဗူးထဲထည့်ပြီး ညနေစာနဲ့ ဝေးတဲ့ ညအိပ်ခါနီးအချိန်မှာ အဲဒီရှားစောင်းလက်ပတ်ယိုကို စားပေးမယ်ဆိုရင် ဆီး၊၀မ်း၊လေ မှန်ပြီး အသားအရေစိုပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း ၊ဗေါက်ထခြင်းကိုတော့ မိမိခေါင်းလျော်တဲ့အခါမှာ မိမိအသုံးပြုတဲ့ရှန်ပူ နဲ့အတူရောလျော်ရင် ဗေါက်ထတာဆံပင်ကျွတ်တာကနေကင်းဝေးပြီး ပျော့ပျောင်းလှပတဲ့ဆံပင်ကလေးကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မိမိခေါင်းလျော်ရည်ထည့်မည့် ဖလားဒါမှမဟုတ် ဇလုံကလေးပေ့ါ အဲဒီအထဲကို ရှားစောင်းလက်ပတ်ရဲ့ဂျယ်လီကလေးတွေပဲရအောင်အပေါ်ယံကအစိမ်းဖတ်ကလေးကို ဓါးနဲ့ အသာခွာယူပြီး ဂျယ်လီလိုအသားကလေးတွေကို မိမိအသုံးပြုတဲ့ ဘီးကလေးနဲ့ သာသာကလေး ခြစ်ယူပါ။ ပြီးရင်မိမိအသုံးပြုမယ့် ခေါင်းလျော်ရည်ထည့်ထားပြီးမိနစ်၃၀ခန့်ထားပေးပါ။ ခေါင်းလျော်တဲ့အခါ ရောမွှေလိုက်ပါ လျော်တဲ့အခါမှာ ဦးရေကိုလက်နဲ့ဖွဖွသာကုတ်ပါ။ ခဏပေါင်းထား သလိုဖြစ်အောင် ဖွဖွကုတ်ပေးပါ။ ၅မိနစ် ၁၀ မိနစ်လောက် ထားပြီး ရေနဲ့လျော်ပေးမယ်ဆိုရင် သင့်ဆံပင်ဟာ နူးညံ့ပြီး ဗေါက်ကင်းတဲ့သူဖြစ်မှာပါ။ ဆံပင်သားဟာလည်း နှစ်ခွမဖြစ်တော့ပါဘူး။ နောက်ထပ်အသုံးဝင်တာရှိပါသေးတယ် ။အဲဒါကတော့ ရှားစောင်းလက်ပတ်သတ္တုရည်ကိုသောက်သုံး ခြင်းပါပဲ အဲဒါကတော့ ကိုယ်အတွင်းကကလီစာတွေအတွက် သိပ်ကောင်းတဲ့ဆေးရည်ပါတဲ့။ အဲဒါကိုဂျပန်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်နေပြီလို့သိရပေမယ့် ဆေးရည်ကြိုနည်းကိုအတိအကျမသိသေးတဲ့အတွက် နောက်မှဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါ့မယ်လို့ ..........နော်။ အထက်ကဖော်ပြပေးခဲ့တာတွေကတော့ ကျွန်မလက်တွေ့ မို့ပါ။ ကျွန်မ သင်တန်းတခုတက်ရတုန်းက ကျွန်မဆံပင်က တင်ပါးဖုံးခါနီးအထိရှည်ပါတယ်။ သင်တန်းမှာက ဆံထုံး မထုံးမနေရဆိုတော့ ဆံပင်ကို ခေါက်ရပါတယ်။ သူများလို တစ်ပတ်လျှိုလည်းမထုံးတတ်ပါဘူး ။အဲဒါကြောင့် ပိုက်အုတ်နဲ့ပဲ မရမက ခေါက်ထုံးရတာဆိုတော့ ခေါက်ထားတဲ့အရာကနေဆံပင်တွေကျိုးကုန်ပါတယ်
တော်တော်လည်းပျက်စီးကုန်ပါတယ်။ ရေမကောင်းတာလဲပါတာပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့်ဆံပင်ကိုကျော်လည်အထညှပ်လိုက်ရပါတယ် ။ အဲဒီနောက်မှာမှ ရှားစောင်းလက်ပတ်နဲ့လျော်ရတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးလျော်ဖြစ်တာပါ။ ရှားစောင်းလက်ပပ်သတ္တုရည်ပြုလုပ်နည်းနှင့်အခြားနည်းများ ရှားစောင်းလက်ပပ်အရွက်ကို အရင်းကနေ ဓါးထက်ထက်နဲ့ဖြတ်ပါ။ တစ်ယောက်စာအတွက်ပဲဆိုရင်တော့ လေးရွက်၊ငါးရွက်လောက်အနည်းဆုံး ဖြတ်ယူပါ။ အရွက်ငယ်လေးတွေကိုမဖြတ်ပဲအပင်မှာပဲချန်ထားခဲ့ပါ။ ရေစင်စင်ဆေးပြီးဆူးတွေနဲ့ထိပ်ဖျားကို ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါ။ ၁။ ဓါးနဲ့ပါးပါးလှီးပြီး သစ်သီးဖျော်ရည်စက်နဲ့မွှေပါ။ ၂။ ပိတ်စပါးသန့်သန့်နဲ့ အရည်ညှစ်ပါ။ ရှားစောင်းလက်ပပ်ရည်ကို အိုးသန့်သန့်တစ်လုံးနဲ့ ခံယူပါ။ ၃။ ရှားစောင်းလက်ပပ်ရည်ကို မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး မိနစ်၃၀ ခန့်ကြာအောင်ကျိုပါ။ ဆူလာတဲ့အခါမှာ အမြှုပ်တွေတက်လာပါလိမ့်မယ်။ တက်လာတဲ့ အမြှုပ်တွေကို ခပ်ထုတ်ပစ်ပါ။ အမြှုပ်တွေဟာ ဖန်တဲ့အရည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အမြှုပ်တွေကိုကုန်အောင်ခပ်ထုတ်ရတာပါ။ ၄။ ပျားရည်(သို့မဟုတ်) သကြားသန့်သန့်သင့်ရုံလောက်ကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရသာဖြစ်အောင်ထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပေးပါ။ အအေးခံထားပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်သိမ်းထားနိုင်လျှင် ပိုကောင်း ပါတယ်။ သွေးချို၊ဆီးချို ရှိသူများ အတွက်ကတော့ အချိုမထည့်သင့်ပါဘူး။ သဘာဝအတိုင်းသောက်တာပိုကောင်းပါတယ်။ ရှားစောင်လက်ပပ်သတ္တုရည်ကို နေ့စဉ် ကြွေဇွန်းကြီး ၁ဇွန်းနှုန်းဖြင့် သုံးကြိမ်သောက်သင့်ပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပပ်ရည်ကို ဒီအတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုရင် သူ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ အောက်ဇားလစ်အက်ဆစ် Oxalic Acid တွေက ဓါတ်ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရေခဲသေတ္တာမရှိသူများ နှစ်ရက်စာလောက်သာကျိုချက်သောက်လျှင်ကောင်းပါတယ်။ နှစ်ရက်ထက်ပိုမထားသင့်ပါဘူး။ ရှားစောင်းလက်ပပ်အမှုန့်ပြုလုပ်နည်း ရှားစောင်းလက်ပပ်အရွက်ကို သန့်စင်အောင်ဆေးပြီး ဆူးတွေနဲ့ထိပ်ချွန်တွေကို ဖယ်ပြီး ပါးနိုင်သလောက်ပါးအောင်လှီးပါ။ ပါးလေကောင်းလေဖြစ်ပါတယ်။ လှီးထားတဲ့ရှားစောင်းလက်ပပ်အဖတ်လေးတွေကိုဝါးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဆန်ကောထဲမှာဖြန့်လှန်းပါ။ တစ်ရက်နဲ့မခြောက်ရင် နှစ်ရက်၊ သုံးရက်စသည်ဖြင့်လုံးဝ ခြောက်သွားအောင်လှန်းပါ။ နှစ်ရက်၊သုံးရက်ကြာတဲ့အခါရှားစောင်းလက်ပပ်တွေလုံးဝ ခြောက်သွားပြီဆိုရင် ဆုံထဲမှာထည့်ပြီး ထောင်းပါ။ မှုန့်မှုန့်ညက်ညက် လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆန်ကာချပေးရုံပါပဲ။ ရှားစောင်းလက်ပတ်အခြောက်မှုန့် သောက်နည်းကတော့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းကို ရေနွေးတစ်ခန်ခွက်နဲ့ရောပြီး တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်၊သုံးကြိမ်သောက်ပါ။ ရှားစောင်းလက်ပပ်အမှုန့်ပြုလုပ်ဖို့အချိန်မရသူတွေအတွက် ရှားစောင်းလက်ပပ် အခြောက်ဖတ် အတိုင်း ရေနွေးဆူဆူထဲခတ်ပြီးရေနွေးကြမ်းသောက်သလိုသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
သောက်ရတာခက်တယ်ထင်ရင်တော့ပျားရည် လေးနည်းနည်း ထည့်သောက်ပါ။ သွေးချို၊ဆီးချိုရှိ သူများအတွက်ကတော့ပျားရည်မထည့်သင့်ပါဘူး။ပျောက်ကင်းကာကွယ်နိုင်တဲ့ရောဂါများကတော့ အစာအိမ်ပြည်တည်နာနဲ့ အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါ၊ ဆီးချို၊သွေးချို၊ အသည်း၊သွေးတိုးရောဂါ အစရှိသည်တို့ကိုကာကွယ်ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ချက် ၊ ဆရာမောင်မောင်လှိုင်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားတဲ့ အံ့ဖွယ် အစွမ်းထက်တဲ့ ရှားစောင်းလက်ပပ်သတ္တုရည်စာအုပ်မှ စုစည်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း သိစေချင်တဲ့အတွက် ရေးတတ်သလိုရေးထားတာကြောင့် စာလုံးအမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပါနော်။ ( ခေါင်းလျော်ရည်နဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ်ရောသုံးနည်းကိုပြောပြပေးခဲ့တဲ့တောင်ကြီးက ညီမငယ် နီလာကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုလက်တွေ့လည်း လျော်ပြီး ဆံပင်တွေပြန်ရှည်နေပါပြီလို့ .........) ကမ္ဘာသစ်မှကူးယူတင်ပြသည်
Labels: ကျန်းမာရေး, နွယ်မြက်သစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်
် ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါဟာ အဆုတ် တွင်းရှိ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း ကို ထိခိုက် စေသော နာတာရှည် ရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ် .. အမေရိကတွင် လူဦးရေ...
အင်္ဂဝိဇ္ဇာဗေဒင်ပညာ(အပိုင်း ၁ )
အင်္ဂဝိဇ္ဇာဗေဒင်ပညာ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ ကျမ်းရင်းလင်္ကာကြီး (ဆရာတော်ကြီး ခင်ကြီးဖျော်) (၁) အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ နည်းကျယ်စွာကို၊သေချာမှတ်စွဲ ကေ...
Item Name --------- Cassia Flower (နန်းလုံးကြိုင်) Category ------------ Raw Material Botany Term -------- Acacia...
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားဆင်းတုတော်ပူဇော်ရသည့်အကျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်တိုင်း၌ ဗုဒ္ဓ၏ရုပ်ပွားဆင်းတုများကို ကိုးကွယ်ပူဇော်ကြ၏။ဘုရားကျောင်းဆောင်ကို အိမ်ဦးခန်း စ...
အင်္ဂဝိဇ္ဇာဗေဒင်ပညာ(အပိုင်း ၃ )
အင်္ဂဝိဇ္ဇာဗေဒင်ပညာတွင် အချိန်ပေါ်လိုက်၍ အခါပိုင်း ခြင်းကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှ မှန်ကန်သော အဖြေကိုထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်ရာ လေ့လာလိုသူများ အလွယ်တက...
ဗီတာမင်ဘီတွေဟာ လိင်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပုံမှန် လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဗီတာမင်ဘီ ပမာဏဟာ ထွက်ရှိလာတဲ့ လိင်ေ...
နက္ခတ္တဗေဒ မှတ်စုများ(၁) ယုဂ် များ (YOGAS )
ယုဂ် များ (YOGAS ) ဂြိုဟ်တို့၏ ရပ်တည်ခြင်း ၊ ပူြး...
ဆံပင်ဖြူ၍ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် ဆံပင်ကို သန်စွမ်းနက်မှောင်လာစေမည့် သဘာဝဆေးနည်းလေးကို ကျန်းမာရေးသတင်းများမှ မျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။ ဆေးနည်း ...
ဆေးပညာရှင်များ၊သိပ္ပံပညာရှင် များစွာ ရောဂါကာကွယ်ဆေး၊ ကုသ ဆေးမျိုးစုံတီထွင်ဖန်တီးလျက်ရှိကြ သည်။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ထိပ်ပြောင် ခြင်းအတွက် ထ...
ဓါတ်ပုံကောင်း ရရန် နည်းလမ်း ၂၁ ခု (အပိုင်း ၁)
21 Ways to shoot better Photo Graph. by Patrick Winfield ဓါတ်ပုံကောင်း ရရန် နည်းလမ်း ၂၁ ခု (OpenSky) ၁။ အနီးအဝေး ဓါတ်ပုံကောင်းသည် မည်...
Support : Copyright © 2011. လွင့်မောင်မောင်(ထားဝယ်) - All Rights Reserved